गोरेटाहरू मेटिएछन्, गौँडाहरू भत्किएछन्- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
गोरेटाहरू मेटिएछन्, गौँडाहरू भत्किएछन्
वैशाख ७, २०७६ गंगा बीसी
काठमाडौँ — अहिले नुन, सुन, लत्ताकपडालगायत लिन १२, १३ दिन पैदल हिँडेर नेपालगन्ज जानुपर्ने अवस्था छैन  । चालीसको दशकको मध्यसम्म नुन लिन रुकुमबाट नेपालगन्ज हाट गइन्थ्यो  ।
त्यसपछि आठ दिन पैदल हिँडेर सुर्खेतको छिन्चु, ६ दिन हिँडेर सल्यानको बोटेचौर गएर हाम्रा बाबा, काकाहरूले नुन ल्याए । सल्यानको शीतलपाटी, बरला नुन लिन पाँच दिन लागाए । हाट गर्ने टाढा जाने दिन घट्दै गए । सडक नजिकिंदै आयो, नुन पनि नजिक आयो । नेपालगन्जसँगको नुन, सुन र लत्ताकपडाको साइनो अब लगभग टुट्यो । अहिले अरू नै साइनो छ । मेरा बा अहिले पनि नेपालगन्ज पुग्दा निःशुल्क बसेका धर्मशाला सम्झन्छन् । त्यो नुन, सुन, कपडा घिउसँग साटेको साइनो हो ।
कसरी बिर्सनु ती दिन, जहाँ घिउसँंग नुन र सुन साटिएको थियो । १३ दिन पैदल हिँडेर नुन, सुन र कपडा ल्याएको गोरेटो अब छैन । त्यसबेलाका ती पदचाप परेका गोरेटा केवल सम्झनामा मात्र छन् । रुकुम नेपालगन्ज हिँडेका तीन दिन अब बा र उनका साथीहरूसँग मात्र बाँकी छन् । ती दिन साँच्चिकै जीवन्त र कठिन थिए भन्छन् बा । नुन लिन नेपालगन्ज जाने बेला झाडापखाला लागेर मृत्यु भएका हटारुको सत्यकथा बाले सुनाउँथे । नुन लिन नेपालगन्ज एक मात्र विकल्प थियो । घिउका टिन बाकेर नेपालगञ्ज जानु अनि नुन, सुन र लत्ताकपडा लिएर फर्कनु हरेक वर्षको हिउँदको बेला हुन्थ्यो । हाट जानुअघि तेल घसेर तिघ्रा बलियो बनाइन्थ्यो । हाट जाँदा खुट्टा सद्दे भइरहोस् भन्ने प्रार्थाना गरिन्थ्यो । त्यसबेलाका हटारु गाउँका हिरो हुन् । हटारुबिनाको घर नुनबिनाको तरकारीजस्तै हुन्थ्यो ।
ढिकेनुनको बोरा बोकेर बाबाको हटारु टोली करिब दुई साता लगाएर फर्कन्थे । जब हटारु गाउँ फर्कन्थे, माहोलै बेग्लै हुन्थ्यो । गाउँ पुग्नुअघि बिर्सौना हुन्थ्यो, हटारुहरू त्यहींबाट घर पुगेको संकेत गर्थै । हाट गएको घरमा मीठोमसिनो पाक्थ्यो । किनकि ढिकेनुन, सुन, जिरा मसला, मट्टीतेल, लत्ताकपडा कोसेली लिएर आउने हटारुको घरमा भव्य स्वागत हुन्थ्यो । अहिलेजस्तो बिजुली नभए पनि घर उज्यालो भएजस्तै हुन्थ्यो । घर पुगेपछि हटारु हिरोजस्तै हुन्थे । जति किलोग्राम धेरै नुन ल्यायो, ऊ त्यति बहादुर मानिन्थ्यो । गाउँभर चर्चा हुने नै भयो । आखिर त्यति टाढा हाट गर्न जाने अवस्था सडकले गराएको थियो । अहिले त केको हाट जानु ? घर आगनमै नुनको पोका आइपुगेको छ । अब न हाट जाने अवस्था रह्यो, न हटारु । केही औंलामा गन्न सकिने पूर्वहटारु मात्र छन् ।
हामी फुच्चेहरू बा हाटबाट घर फर्केको दिन खुसीले नाच्थ्यौं । हाटबाट केही न केही चीज आएको हुन्थ्यो । केही नल्याए पनि कम्तीमा मुख गुलियो पार्ने गुड (सक्खर) खान पाइन्थ्यो । घरभरि केटाकेटी भएकाले हाटबाट ल्याउने ठूलो अपेक्षा हुँदैनथ्यो । केही गरी जुत्ता ल्याइदिएमा भने भुइँमा खुट्टा हुँदैनथ्यो । नयाँ जुत्ता देखाउन पूरै बिहानभरि गाउँ घुमिन्थ्यो । ती दिन साँच्चिकै रहरलाग्दा थिए । एउटा जुत्ता पाएमा, सानो खेलौना वा अरू कुनै चीज पाएमा संसारै खुसी हुन्थ्यो । हाल काठमाडौंबाट गाडीबाटै गए पनि बढीमा २४ घण्टामा रुकुम पुग्न सकिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट उडेर सवा घण्टामा रुकुम पुग्न सकिन्छ । रुकुमबाट ६ घण्टामा गाडी चढेर नेपालगन्ज पुगिन्छ । सडकले जोड्यो, बाटो छोटो भयो । यात्रा सहज छ । अहिले पश्चिम रुकुमका सबै गाउँमा गाडी पुगेको छ, घर गोठ नजिकै मोटरसाइकल राखेको देखिन्छ । कतिपयले भैंसी बेचेर त्यही गोठमा मोटरसाइकल पार्क गरेका देखिन्छ । अहिले सडक क्रान्ति नै देखिन्छ त्यहाँ ।
चैतको दोस्रो साता काठमाडौं विमानस्थलको धावनमार्गमा गुडेको नेपाल वायु सेवा निगमको ट्विनअटर जहाज फर्कार्एर ह्याङ्गर पुर्‍याएर मर्मत गरेपछि रुकुमतिर लाग्यो । काठमाडौंमा बाक्लो तुवाँलो थियो, अरू जहाज तुवाँलो फाट्ने प्रतीक्षामा थिए । नेपाल वायुसेवाको जहाज भने उड्यो । मध्यपहाडी जिल्लाहरू नुवाकोट, गोरखा, अर्घाखाँचीलगायत आधा दर्जन जिल्ला पार गरेर रुकुम पश्चिम चौरजहारी पुग्नु छ । पहाड छल्दै चालकले उडाइहेका थिए । ‘पाइलटले आफू ढुक्क भएरै उडाएका होलान् नि । म बेकारमा किन डराउनु ?’ मनलाई शान्त मार्दै मनकुरा गरे । मेरो नजिक बसेका केटा एयर होस्टेसतिर हेर्छु, उनी ढुक्कसँग बसेका छन् । उनको पेसानै यस्तै । हामीजस्तो डराएर साध्य छैन । ‘जहाज त तुवाँलो झल्दै पहाडको बीचबाट गइरहेको छ, कस्तो सिपालु पाइलट ?’ मैले कुरा गर्ने मेलो निकाले । ती केटा एयर होस्टेसले भने, ‘यो मौसम ठीकै हो । योभन्दा खराब मौसमा उड्नुपर्छ ।’ उनले त्यही दिन जुम्ला, डोल्पा, साँफेबगर पुगेर नेपालगन्ज फर्कने गर्ने सुनाउन भ्याए । मलाई भने चौरजहारी कतिबेला पुगौंजस्तो भइरहेको थियो ।
काठमाडौंबाट उडेको जहाज मध्यपहाडको तुवाँलो छल्दै करिब सवा घण्टा बढीको यात्रापछि पश्चिम रुकुमको चौरजहारी विमानस्थलमा आर्लिएपछि ‘क्याप्टेन सर, धन्यवाद’ भन्न कटपिटमा पुगेछु । उनले हाँस्दै भने, ‘तपाईं बढी डराउनुभएको थियोजस्तो लाग्यो ।’ जहाजमा जम्मा ६ जना यात्रु । अरू सबै महिला र बूढाबूढी मात्रै थिए । जहाज चौरजहारीबाट एक जना यात्रु टिपेर नेपालगन्ज उड्यो । निजी कम्पनीका वायु सेवा फाइदा हुने रुटमा मात्र चल्छन्, सरकारीले दुर्गममा सेवा पनि दिन्छन् । थोरै यात्रु हुँदा पनि दुर्गममा सेवा दिन्छन् । माथि गाउँबाट सरोज भाइ मोटरसाइकल लिएर मलाई लिफ्ट दिन चौरजहारी आएका थिए । सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण गर्न लागेका १० स्मार्ट सिटीमध्ये चौरजहारी पनि एक हो । तीव्र गतिमा पक्की भवन बन्ने क्रम चलेको छ । तराईको झल्को दिने गरी भाडाका अटोरिक्साको ताँती लागिसकेछन् । सरोजको मोटरसाइकलको तीव्र गति देखेर मैले भनें, ‘बाबु, बिस्तारै जाऔं । घर पुग्न हतार छैन ।’
गाउँ जान पाउँदा खुसी हुने दिन पनि आए अहिले । गाउँबाट सहरतिर जानु सामान्य भइसक्यो । सहर गाउँ पसेको होइन, गाउँ विकास हुन थालेका हुन् । सहरका कुरा गाउँ जाँदै छन्, बरु गाउँका कुरा सहर आउन मुस्किल । मान्छेचाहिँ सकीनसकी सहर पस्न खोज्दै छन् । जसरी सहर जबरजस्त गाउँलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । गाउँलाई विकसित गर्नुपर्छ, सबै गाउँलाई सहर बनाउने होइन, सुविधासहितको मौलिकता दिनु राम्रो हुनेछ । गाउँ जान दसैँ, तिहार आउनुपर्छ भन्ने छैन । तर, चलन त्यस्तै बनेको छ, गाउँ जान दसैं तिहार आउनुपर्छ । दसैँ र तिहारले सहरका मान्छेलाई चुम्बकले तानेझैं गाउँ लैजान्छ । केही दिन ‘हेलो हाई’ पछि उनीहरू व्यस्त सहर फर्कन्छन् । प्रायः दसैँमा मात्र घर जाने भएकाले होला, आमाले भन्नुभयो, ‘यो बेला घर आउने अरू काम थियो कि भेटघाट मात्रै ।’ मिसन भेटघाट मात्रै थियो । ७५ वर्ष पुगेका बाआमा र नातेदारसँगको भेटघाट रिन्यु गर्ने धोको पूरा भयो ।
कालापहाड (हिमाञ्चल पहाड, भारत) जाने घटेका छन् । खाडी जाने बढेका छन् । गाउँ थोरबहुत नगद भित्रिएको छ । अब पाखो र केही खेतको उब्जनीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । विदेशको कमाइले घरमा बस्नेहरूलाई अल्छी बनाइदिएको छ । १० वर्षे युद्धले थला पारेको रुकुममा विकासका लहरले अहिले नै ‘गाउँबाट भागिहालौं’ भन्ने अवस्था छैन । गाउँमा केही इलम वा जागिर भए गाउँमा सुगन्ध भरिन्छ ।
यसपटक गाउँघर जाँदा थाहा भयो, केही वर्ष अघि हिंडेका गोरेटाहरू मेटिइँदै गएका रहेछन् । गोरेटा नरहे त्यहाँ हिंड्ने चाहना पूरा हुन गाह्रो हुनेछ । गाउँगाउँमा सडक पुगेपछि गोरेटो को हिंडोस् ? कहिलेकसो गाउँ जानेहरूले याद गर्ने हो, त्यो ठाउँमा गोरेटो बाटो थियो, अहिले धेरै गोरेटा मेटिएछन् । धेरै गोरेटा बाटाहरू हराइसकेछन्, सडक नपुगेका ठाउँमा जंगलले छोपिसकेछ ।
कुन ठाउँको गोरेटोमा कस्ता गौंडो थियो, सबै याद छ अहिले पनि । तर गोरेटा नै नरहेपछि ती गौंडाहरू पनि भत्किसकेछन् । सानोमा पानी र अरू भारी बोकेर हिंड्दा गौंडा काट्नुपर्दा सास्ती भोगेका सम्झनाहरू अहिले पनि छन् । यस पटक गाउँ जाँदा सानोमा हिंडेका थोरै गौंडाहरू मात्र भेटिए, धेरै हराइसकेछन् । गाउँमा धेरै गौंडा हुनु भनेको दुःख भोग्नु पनि हो । उकाली, ओराली गर्दा जति धेरै गौंडा उति धेरै समस्या पर्थ्यो । उकालो र ओरालो गर्दा यति गौंडा काटियो भनेर गणना नै हुन्थ्यो । यो सन्दर्भमा गायक प्रेमध्वज प्रधानले सन् १९६२ मा गाएको गीत अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छ ।
गोरेटो त्यो गाउँको लौ न आज, खोजी खोजी थाके नि,
पहिल्याउन सकिनँ, पहिल्याउन मैले सकिनँ ।
एकलास वन माझ, बिराएँ बाटो आज, अलमलिए लौ न म त...
गाउँतिर अहिले मोटरसाइकल वा गाडीमा कति घुम्ती छन् भन्न थालिएको छ । कहिलै गाडी नदेखेका बूढापाकाहरू गाउँमा गाडी देखेर भन्दै छन्, गाडी त आयो । ल्याउने, नल्याउने चीज बोकेर आयो । गाउँमा गाडी मात्र पुगेन, त्यसले चाउचाउ, बिस्कुट, बियर, रक्सी, सोयाबिन मस्यौरा, खानेतेल, ग्यास, पेट्रोललगायत धेरै चीज ल्यायो । गाउँलेहरू मास, चना बेचर चाउचाउ खान थाले, भटमास सस्तोमा बेचेर सोयाबिनको मस्यौरा खाना थाले । बारी खेतमा फलेको धानचामल, गहुँ, मकै, कोदो नखाएर पसलको चामल उपभोग गर्नर् लागे । तोरी बेचेर सहरतिरबाट गएको तेल किनेर खाने बानी बस्यो । दहीभन्दा कोकमा बानी पर्दै गयो । अरू धेर्र कुरामा बानी फेरिंदै गयो ।
आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नभए पनि महँगो मोटरसाइकल किन्नु सान ठानिन्छ । मोटरसाइकलमा हुइँकेर पुग्ने आखिर त्यही परको बजार हो । बानी बिग्रिइसकेका होइन, खाने बानीमा फेरिएको हो । बानी सुधार गर्न ढिला भइसकेको छैन । सहर भित्र्याउन होइन, मौलिकता जोगाउने मुख्य काम हुनुपर्ने हो ।सडक पुगेपछि उकाली–ओरालीको दुःख भुल्नु स्वाभाविक हो । आफ्नै बारी खेतको खानेकुरा भुल्नुचाहिँ अर्को भूल हो । चौरजहारीमा एक दशकभन्दा बढी पसल गर्दै आएका शशिराम रोकाय सडकसँगै बजार माथिमाथि सर्दै गएको सुनाए । मान्छेको आनीबानी फेरिएको बताए । ‘सडकले नै बजार सार्दै लैजाँदो रहेछ, माथिमाथि सडक गएसँगै व्यापार पनि उतै सर्‍यो,’ उनले भने ।
मान्छेको बानी फेरिएको हो कि बिग्रिएको ? उनी भन्छन्, ‘सजिलै किन्न पाइने भएपछि के भन्ने ? किनेर मसिनो खाने बानी बस्यो । अलिअलि बानी पनि बिग्रियो ।’ पढेका जति सबैले जागिर खोज्न थालेपछि अरू खेतीपातीको काम कसले गर्ने ? पढेर जागिरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले घर गरेपछि अन्य पेसा गरेर खाने कम छन् । ‘आफ्नो पेसा गरेर खानुपर्छ भन्ने कम छन् । बाउबाजेले गरेको कृषि पेसाले धानेन भने अन्य काम गर्न सकिन्छ,’ चौरजहारीका समाजसेवी तेजबहादुर बटालाको भनाइ छ, ‘सुविधासहितको हुनुपर्छ आफ्नो मौलिकता त्याग्नुहुँदैन भन्ने उनको बुझाइ छ ।युवाहरूमा सकेसम्म जागिर खाने, विदेश जाने त्यो सम्भव नभए केही न केही आयआर्जनको काम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । युवाहरूले घरमै कुखुरा, बाख्रापालन र अन्य नगदेबाली काम गरेको देखिन्छ । आयस्रोतले भ्याएसम्म अन्य व्यवसाय गरेको पाइन्छ । बाउबाजेले गरेको कृषि पेसाले अब गुजारा चल्दैन भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ । यसले केही नयाँ काम गर्ने चेतना जगाउनु सकारात्मक पक्ष हो ।
दसैंतिहारबाहेक अरू बेला गाउँ पुग्दा खासगरी बूढापाकाहरूले प्रश्न गर्छन्, के कामले गाउँ आयौ ?’ दसैंतिहारमा गाउँ जानुपर्छ, अरू बेला नगए पनि हुन्छ भन्ने आम बुझाइले यस्तो प्रश्न आएको होला । गाउँमा भेटिने जोसुकै बूढापाकाहरू खुसी व्यक्त गर्छन्, ‘आउँदै गरे, माया नमारे ।’अब स्थानीय सरकार गाउँमै छ । जनताका कुरा सुन्ने जनप्रतिनिधि छन् । जनताको कुरा सुन्नु नसुन्नु अर्कै कुरा हो । गुनासा र अपेक्षा थामिनसक्नु छन् जनप्रतिनिधिलाई । काम भएको छ । विकास हार्डवेयरमा बढी देखिन्छ । मुख्यगरी बाटाघाटाका काम जताततै देखिन्छ । विकास भनेको सडक होझैं लाग्छ त्यता पुग्दा । सफ्टवेयर अर्थात् चेतनाको काम बाँकी छ । चौरजहारी नगरपालिकाको प्राथमिकता भने अर्कै रहेछ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादनलाई मुख्य योजना बनाएका छौं,’ मेयर विशाल शर्माले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि उत्पादन राम्रो भए नगरपालिका समृद्ध हुने विश्वास छ ।’ उनले जनतालाई विकासको अवधारणा बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी मात्र भएको बताए । उनले हार्डवेयर विकाससँग सफ्टवेयर विकास अर्थात् जनचेतनाको काम गर्न त्यति नै जरुरी रहेको बताए ।
खासगरी युवाहरू विकासलार्ई सही सदुपयोग गर्नेभन्दा देखासिकीमा रमेको देखिन्छ । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहले मदिरा नियन्त्रण गर्ने अभियान रोकिएको छ । गाउँमा दाउराको चाङजस्तै बियरका खाली बोटलको चाङ लाग्न थालेको छ । ‘विकास भएको छ, त्यसलाई आफ्नोअनुकूल कसरी प्रयोग गर्ने चुनौती छ । युवाहरूमा चेतना आउनु आवश्यक छ,’ चौरजहारीका स्थानीय व्यवसायी यदुकुमार आचार्यले भने ।गाउँलाई गाउँ रहन दिनुपर्छ, सुविधासम्पन्न गाउँ । न कि सहरको नक्कल । गाउँमा पाइने रैथाने चीजको जगेर्ना नगरे भोलि के होला ? त्यसबेला गाउँ न सहर जस्तो न गाउँजस्तो हुने छ ।
कवि मीनबहादुर बिष्टको कविताबाट व्यंग्य गरेजस्तो गाउँमा धेरै कुरा छ ।
केही महिनाको छुट्टीमा घर फर्कंदा
भन्ने गर्छन् लाहुरेहरू
केही छैन, तर जरुर केही छ पहाडमा ।
जरुर पहाड अर्थात् गाउँमा केही छ र मान्छेहरू दुःखलाई सुखमा बदलेर बसेका बूढाबूढी मात्र होइन, युवाहरू पनि छन् । पहाड पक्कै उकालो छ, त्यो उकालोमा हिंड्ने बलिया पाइलाहरू छन् । अब त गाउँमा विकास पनि पुगेको छ, विकाससँगै सहरका कोसेली पुगेको छ । जरुर गाउँमा धेरै चीज छ ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०९:२०
उनले २०५२ सालमा आफूले युद्ध सुरु गरेजस्तै नक्कल गर्न खोजे प्रतिउत्पादक हुने भन्दै मूलधारमा आउन सुझाव दिए। विप्लवले पूर्व माओवादीको स्थान लिने भन्दै ‘एकीकृत क्रान्ति’ को कुरा गर्ने बताइरहेका बेला दाहालको यो भनाइ आएको हो।
‘यो पार लाग्ने बाटो होइन, म चन्दहरूलाई राम्रोसँग चिन्छु, मैले नै स्कुलिङ गरेको हुँ’, उनले भने, ‘उहाँले सचिवका रूपमा मसँग लामो समय काम गर्नुभएको छ। उनीहरू पनि वार्ता र संवादमार्फत मूलधारको राजनीतिमा आएर आफ्नो कुरा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।’ दाहालको चेतावनी मिश्रित सुझाव अघि सरकारले विप्लवविरुद्ध कारबाही सुरु गरिसकेको छ।
सरकारले गतसाता कपिलवस्तुमा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई गोली हानी कारबाहीको ‘फायर’ खोलेको छ। यसले सरकार चन्दका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अभियानमा लागेको देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल चन्दका गतिविधिलाई छुट नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन्। दुवै नेताले उनका गतिविधिमाथि ‘प्रशासनिक कारबाही’ गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई निर्देशन दिइसकेका छन्। त्यही निर्देशनको पहिलो कदम बिहीबार चन्दको गाउँ शिवनगरमा भएको सर्च अप्रेसन हो। सर्च अप्रेसनका क्रममा प्रहरीले भाग्न लागेका कार्यकर्ताको खुट्टामा गोली प्रहार गर्‍यो। उनको बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। सर्च अभियान देशभर सञ्चालन हुने गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
गृहमन्त्री थापाले गत साता संसदीय समितिमा चन्दले सत्ता उल्ट्याउन समानान्तर गतिविधि बढाउँदै लगेको बताएका थिए। चन्दले सरकारलाई चुनौती दिन रोल्पालगायतका जिल्लामा जनसत्ता गठन गरेको दाबी गरेका छन्। उनको पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले गत साता अज्ञातस्थलबाट कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा जनसत्ता गठन गरी कर उठाएको बताए। ‘यो सत्ताविरुद्ध जनसत्ता गठन गरेका छौँ, यो अभियान चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारबाट कर उठाइएको छ।’
अब कुन बाटो?
सरकारले नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाए पनि छलफल बढेन। ‘सरकारले वार्ताका नाममा षड्यन्त्र गर्न थाल्यो, त्यसकारण वार्तामा गएनौं,’ ओलीले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी वार्ता विरोधी होइनौं।’
सरकारले भने आफ्नो लचकतालाई बेवास्ता गरेकाले चन्दमाथि कठोर कदम चाल्ने नीति लिएको बताए। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गणतन्त्रविरुद्ध हुने कुनै पनि संघर्ष गलत हुने बताए। ‘हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न खोजेका छौं, त्यसकारण वार्ताका लागि समिति बन्यो,’ उनले भने, ‘गणतन्त्रविरुद्ध संघर्ष केका लागि? उहाँ (विप्लव) को यात्रा कतातिर हो?’
चन्दको पार्टीले २०७३ भदौमा महाधिवेशन गरी ‘एकीकृत क्रान्ति’ गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो क्रान्ति २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेजस्तो नहुने चन्दले बताएका थिए। वरिष्ठ नेता ओलीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन दलाल पुँजीवादविरुद्ध हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ नभए स्वरूप बदलिन पनि सक्छ।’
चन्दले पार्टीनिकट अनलाइनलाई हालै दिएको अन्तर्वार्तामा क्रान्तिका लागि सेना बनाएको बताएका छन्। ‘यहाँ त जनमुक्ति सेना बनाउनुपर्नेछ, लड्नुपर्नेछ, ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘जनमुक्ति सेनाको एउटा अवधारणा र संरचना हामीले बनाएका छौं, लिएर गएका छौं र एकदम सुदृढीकरणतिर जाँदै छ।’
पूर्वमाओवादीले जस्तो गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति उनले लिएका छैनन्। उनको रणनीति सहरकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने छ। तत्काल सशस्त्र विद्रोह गरिहाल्ने अवस्थामा उक्त पार्टी छैन। सशस्त्र युद्ध गर्दा टिक्न नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। ‘सशस्त्र विद्रोह गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छैन, राजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि विद्रोहको नारा लाग्छ,’ चन्दका एक नेताले भने।
गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीका अनुसार चन्दको राजनीतिक लाइन ‘उग्र र अतिवादी’ हो। ‘चन्द समूह उग्र र अतिवादी धारकै भए पनि एउटा राजनीतिक समूह हो, उनीहरू वार्ताका माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा आएर देशको सेवामा लागुन् भन्ने चाहना थियो,’ उनले भने, ‘वार्ताको समयलाई यो समूहले आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्ने एक सूत्रीय अभियानमा लगायो र अवसर गुमायो।’
प्रहरीले इटहरी र कपिलवस्तुबाट बरामद गरेका एक थान एम–१६ र दुई थान एसएमजी राइफल तत्कालीन माओवादीले कब्जामा लिएका हतियार हुन्। लडाकु समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही लडाकुले हतियारसहित शिविर छाडेका थिए। पूर्वलडाकु कमान्डरका अनुसार चन्द र प्रवक्ता खड्‌गबहादुर विश्वकर्माले सुरक्षाका लागि राखेका हतियार फिर्ता गरेनन्। उनका अनुसार चन्दको पार्टीसँग करिब पाँच दर्जन अत्याधुनिक हतियार छन्। छुट्टै पार्टी गठन गरेपछि थप हतियार खरिद गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ।
गृहमन्त्री थापाले पूर्वसहयोद्धा चन्दका गतिविधिलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएका थिएनन्। दुई साताअघि राजधानीमा विस्फोट गराएपछि उनी सतर्क बनेका छन्। ‘गृहमन्त्रीलाई चन्दको शक्तिबारे राम्रो जानकारी छ,’ थापानिकट एक नेताले भने, ‘त्यसकारण वार्ता र संवादमा जोड दिनुभएको हो। तत्काल आक्रामक हुनुभन्दा छलफलबाट निकास निकाल्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अबचाहिँ कठोर कदम चाल्ने मुडमा हुनुहुन्छ।’
चन्दको पार्टीका गतिविधि विगतमा प्रचारात्मक मात्रै भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले हिंसात्मक मोड लिने संकेत गरेका छन्। बिहीबार कपिलवस्तुको शिवनगरमा प्रहरीको गोली चलेपछि त्यसको बदला लिन थप हिंसा हुने जोखिम रहेको गृहको बुझाइ छ।
सरकार आक्रामक भइरहेका बेला नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘विगतको युद्ध, जनआन्दोलन र संविधानसभाका उपलब्धिमा टेकेर समाजवादको बाटोमा अघि जान सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘गणतन्त्र र नयाँ संविधानका उपलब्धिमा टेकेर बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ।’
चन्दले सशस्त्र युद्ध सुरु गरी आत्मघाती कदम नचाल्ने पूर्वमाओवादीका नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार चर्को आन्दोलन गरेर कुनै विन्दुमा उनी सत्ता साझेदारीमा सहझागी हुन्छन्।
नेत्रविक्रमचन्दको क्रान्ति मोह विद्यार्थी जीवनदेखिकै हो। उनले पञ्चायत, बहुदल र युद्ध सुरु भएपछि क्रान्ति मोह आत्मसात् गरे। पूर्वमाओवादी २०६४ को निर्वाचनमा ठूलो दल भएपछि सरकारमा सहभागी भयो। त्यसबेला मोहन वैद्य, चन्दलगायत नेताले विद्रोहको नीति लिए। विद्रोहको कसरत भए पनि अन्ततः अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको बलमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी युद्ध समाप्त भयो।
पूर्वमाओवादीले क्रान्तिलाई विसर्जन गरेको दाबी गर्दै चन्दको पार्टीले त्यसको ठाउँ लिने प्रयास गरेको देखिन्छ। युद्धमा बेपत्ता, घाइते र मृतकका परिवारलाई पूर्वमाओवादीले भुलेको भन्दै सरकारप्रति वितृष्णा जगाउने अभियान चलाएको छ।
चन्दले ‘एकीकृत क्रान्ति’ को नाममा युवालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। माओवादी सत्तामा हुँदा पाखा लगाइएका केही नेता–कार्यकर्ता उनको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। ‘केही व्यक्तिलाई क्रान्तिको नशा लागेको छ, त्यो छाड्न गाह्रो भएको देखिन्छ,’ पूर्वमाओवादी कमान्डरले भने। गत स्थानीय निर्वाचनमा रोल्पाको थबाङलाई आधार क्षेत्र बनाउने चन्दको प्रयासलाई माओवादीले भत्काइदिएको थियो।
२०७१ मा वैद्यबाट अलग भएका चन्दले २०७३ फागुन १ मा नेकपा नामको पार्टी गठन गरेका थिए। ०२४ फागुन ११ मा रोल्पा इरिबाङमा जन्मिएका चन्द पार्टी सत्तामा रहँदा कुनै पनि लाभको पदमा गएनन्। उनी विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए।
चन्दको नेकपाले देशव्यापी चन्दा उठाइरहेको बारे सरकार जानकार छ। एनसेलका विभिन्न टावरमा भएको आक्रमणलाई सरकारले चन्दासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ। नेता हेमन्तफ्रकाश ओलीले सरकारलाई कर नतिरेकाले एनसेलमाथि आक्रमण गरेको दाबी गरे। ‘चन्दा नदिएका कारण आक्रमण गरियो भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेकाले कारबाही गरेका हौं।’
उनले देशव्यापी स्वैच्छिक चन्दा उठाए पनि जबर्जस्ती नगरेको दाबी गरे। गृह मन्त्रालयले भने उक्त पार्टीले देशव्यापी जबर्जस्ती चन्दा असुलिरहेको जनाएको छ। चन्दको पार्टीले लामो समयदेखि अपर कर्णाली आयोजना अवरुद्ध गर्दै आएको छ। अपर कर्णाली, अरुण ३ लगायतमा आँखा लगाएको छ। चन्दले आफूनिकट इरातोखबर डट कमको अन्तर्वार्तामा विदेश लगानीका आयोजना रोक्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘भारतका लगानीकर्ताले, संस्थाहरूले बुझिराखून्, अपर कर्णाली हामी लागू हुन दिँदैनौं, अरुण ३ पनि बनाउन दिँदैनौं,’ उनले भनेका छन्, ‘कोसी बाँधजस्ता जनतालाई सिधै क्षति पुर्‍याउने, घाटा लाग्ने नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने, स्रोतसाधन अस्तव्यस्त बनाउने र कब्जा गर्ने काम हामी हुन दिँदैनौं। त्यो कुरा हामीले जीएमआरलाई भनेका छौं।’
प्रहरीले २०७५ वैशाखदेखि हालसम्म चन्दको पार्टीका ३ सय ८२ जनालाई पक्राउ गरेको छ। केही नेता तथा कार्यकर्ता अदालतको आदेशपछि रिहा भएका छन्। चन्दलाई रोल्पामा टेलिकम टावरमा आक्रमण गरेको आरोपमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७५ १९:०९